ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၈ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ် - Kanbawza Tai News
Home တောင်ကြီး ရှမ်းတောင်သတင်းများ လွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၈ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၈ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်
February 27, 2020 တောင်ကြီး, ရှမ်းတောင်သတင်းများ, လွှတ်တော်,
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၈ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ၅ ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၀ ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း ၅၈ ခု မေးမြန်းပြီး အဆို ၁ ခုနှင့် ဥပဒေ(မူကြမ်း) ၂ ခုကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကာ အစီရင်ခံစာကို လည်း လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးမောင်ညို ၏ “ မ ဘိမ်းမြို့နယ်၊ မဘိမ်းမြို့ရှိ ကြိုးဖုန်းများအား ကောင်းမွန်အောင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” မေးခွန်းနှင့် စပ် လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲ ထွေးမှ “၎င်းကိစ္စအား MPT ရုံးချုပ်ကိုတင်ပြထားကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြို့အတွင်း စက်များအား လှဲလှယ်ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ”စသည်ဖြင့် ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ သည်။
မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းလှဝင်း၏ “ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ နမ့်ရှိုကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ရှိုကျေးရွာရှိ အမ က (မူလွန်)ကျောင်းတွင် ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ် ခွင့်ပြုပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/ မရှိ” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည် နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းမှ “ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းခေါင်းစဉ်တွင် ထည့်သွင်း လျာ ထားပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ရွာငံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစဝ်အောင်မြတ်(ခ) ဦးအောင်မြတ်၏ “ရွာငံမြို့နယ်၊ မြင်းကျဒိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်း တိုင်ပင်ကျေးရွာရှိ မင်းတိုင်ပင် ရေလွှဲဆည်၏ တည်ဆောက် ပြီးစီးမှု အခြေအနေနှင့် ရေလွှဲဆည် ရေရှည်တည်တံ့ရန်အ တွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအား မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ထား သည်”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ “ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေ တွင်လည်းကောင်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ငွေလုံး ငွေရင်းတွင်လည်းကောင်း အသီးသီး လျာထား ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရှိမှုအပေါ် ဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း” ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ် မှူး အောင်သူခိုင်၏ “လားရှိုးမြို့နှင့် (၅)မိုင်အကွာ ဆုံကွယ် ကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း၊ ဆုံကွယ် (စစ်မှု ထမ်းဟောင်း) ကျောင်း၌ (၂)ခန်းတွဲ ရေလောင်းအိမ်သာ(၂)လုံးနှင့် အဝီစိတွင်း(၁)တွင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေတွင် စာသင် ကျောင်းဆောင်သစ် အတွက်လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေတွင် အဝီစိတွင်းအား အသီးသီး လျာထားဆောင် ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း" ပြန်လည်ဖြေ ကြားခဲ့သည်။
မိုင်းကိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးစိုင်းပန်၏ “မိုင်းကိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပန်မိုက်ဟုန်း၊ ပန်မိုက်စုံ၊ ဟိုနား၊ ဝိင်းငင်းခမ်းနားနှင့် ဖောင်းမိန်းကျေးရွာများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ် အားရရှိရေးအတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ KFW ချေးငွေဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်မည်” မေး ခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ် လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန် ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ “ ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှပစ္စည်းများ ဝယ်ယူပြီးစီးပါက၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ် ကြောင်း ”စသည်ဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
မိုင်းကိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးစိုင်းပန်၏ “မိုင်းကိုင်မြို့၏ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း (စဝ်စံထွန်းလမ်း) နှင့် အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း(အောင်မြတ်လမ်း)တို့အား ကတ္တရာ လမ်းခင်းပေးရန်”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စည်ပင် သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်းမှ “ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း အား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဒုတိယ(၃)လပတ်၌ ဆောင် ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အရှေ့မြို့ပတ်လမ်းအား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါကြောင်း ”ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့ သည်။
တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးပြည့်ဖြိုးအောင်၏ “မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ပုံပါကျင်မြို့၊ အခြေ ခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် နမ့်ဟူးခွန်ကျေးရွာ အခြေ ခံပညာ မူလတန်းကျောင်းရှိ စာသင်ဆောင်အား ပြန်လည်ပြု ပြင်ပေးရန် (သို့မဟုတ်) ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ် ပေးရန်၊ စာသင်ကြားမှု အထောက်အကူ ပစ္စည်းများအား ကူညီ ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် အစီအစဉ်ရှိ/ မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပြုပြင်ရန်အတွက် တောင်းခံပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စာ သင်ခုံများအား ချထားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း" ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်းက “ ကြက် သားတွင် ဆဲလ်မိုနဲလားပိုး တွေ့ရှိရသည့်အတွက် ရှမ်းပြည် နယ်အတွင်း ပညာပေးဟောပြောပွဲများနှင့် ကြိုတင်ကာ ကွယ် တားဆီးရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ပေးမှု”မေးခွန်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည် မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ “ ကြက်သားအား သေချာ ချက်စားပါက ကိစ္စမရှိကြောင်း၊ အသားကိုင်လက်အား ဆပ် ပြာဖြင့် သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောရန်လိုအပ်ကြောင်း အိမ် ထောင်ရှင်များအား အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း " ဖြေကြားခဲ့သည်။
မိုင်းကိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းလုံ၏ “ကုန် တင်ယာဉ်ကြီးများကို မိုင်းကိုင်မြို့အတွင်း ဖြတ်သန်းမောင်းနှင် စေခြင်းမပြုဘဲ ရှောင်ကွင်း၍ မောင်းနှင်စေရန် မြို့ရှောင်လမ်း ဖောက်လုပ်ပေးမည့် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဦးခွန်ရဲထွေးမှ “ မြို့ ရှောင်လမ်းအား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
မိုင်းကိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းလုံ၏ “ မိုင်း ကိုင်မြို့နယ်၊ အရှေ့နှင့် အနောက်ဘက်ခြမ်းတို့တွင် တယ်လီ ဖုန်း တာဝါတိုင်များ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ “တည်ဆောက်တပ်ဆင်ရန်အစီအစဉ် မ ရှိသေးပါကြောင်း ”ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
လွိုင်လင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးခွန်ဒီဂေါလ်၏ “လွိုင်လင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အမက(ခွဲ) ကျောက်တန်းနှင့် ကျိုင်းခမ်းအား မူလတန်းအဆင့်တိုးမြှင့်ပြီး ကျောင်း(၆) ကျောင်းတွင် ကျောင်းဆောင်သစ်များ တည်ဆောက်ပေးနိုင် ရန်အတွက် မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်”မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ "၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းတွင် လျာထားပြီး ကျောင်းတိုးအဆင့် ခေါ်ယူရာတွင် အဆိုပါကျောင်းများမှ တင်ပြတောင်းခံခြင်း မ ရှိပါကြောင်း " ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးအောင်ထွဏ်း၏ “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ် တိုင်းတာရေးနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မ ရှိ” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ် ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်မှ "ပြည် ထောင်စုအစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါကြောင်း” ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးအေးမောင်၏ “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ကောင်းဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လွယ်လောင် ကျေးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းမှ “ ၆၀×၃၀ ပေ စတီးဆောက်ချ တစ်ဆောင်အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် ထည့်သွင်းလျာထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ” ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးအေးမောင်၏ “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ဟင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၊ မန်ကန်ကျေးရွာတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော ပညာရေးဝန်ထမ်းနှင့် အခြေခံပညာ မူလ တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး မည်ကဲ့သို့ စီမံဆောင်ရွက်ပေး မည်”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက် တာမျိုးထွန်းမှ “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ကျောင်းအဆင့်တိုး မပါ ဝင်သေးပါကြောင်းနှင့် နွေရာသီတွင် ကျောင်းဆရာမ ထပ် မံ တိုးမြှင့်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း” ပြန် လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ရပ်စောက်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှ ဦးခိုင်ညီညီ ကျော်၏ “ရပ်စောက်မြို့၏ မြို့ရှောင်လမ်းအဖြစ် အသုံးပြု မည့် သီတာလမ်းတွင် ပေ(၁၀၀၀)ခန့်သာရှိသော မြေထိန်း နံရံအား ပြိုကျပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရန် ဦးစားပေး လျာထား ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်မှုမရှိသေးပါကြောင်း ” ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဒေါက်တာဝဏ္ဏ စိုး၏ “ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ရှိ နောင်ခမ်းကန် ပတ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အ ဖွဲ့၏ သီးခြားရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မ ရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေး ဝန် ကြီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်းမှ “၎င်း၏ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေကျပ် သန်း ပေါင်း (၆၁)သန်း ကုန်ကျမည် ဖြစ်သဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်တွင် လျာထား တင်ပြပြီး ဘဏ္ဍာငေွ ရရှိမှု အပေါ် မူ တည်၍ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း” ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး၏ “ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ နမ့်နီ/ နမ့်လုံကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျိုင်း တုံ- တာချီလိတ်သွား လမ်းမကြီးအထိ ဆက်သွယ်ထားသော ကျေးရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း ၈ မိုင်အား ကျောက်ချော လမ်းခင်းပေးရန်နှင့် (၁၆၀ x ၁၅)ပေ ချောင်းကူးသစ်သား တံ တား(၁)စင်းအား (RC)ကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် ဆောင်ရွက် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ် လုံ ခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ “၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေတွင် တင် ပြထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေရရှိပါက အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးအားကို၏ “ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို ကုစားပေးရန်နှင့် လွှတ်တော်မေးခွန်းဖြင့် က တိပြုခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက် ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ “၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်တွင် တင်ပြ တောင်းခံခဲ့သော်လည်း ခွဲဝေမှု မရရှိခဲ့ ပါကြောင်း၊ လတ်တလောတွင် ချောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုများ လုပ်ပေးထားပါကြောင်းနှင့် ပြည်နယ်စိုက် ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ လည်း “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၁၆၇.၁၆၉ ကျပ်သန်း အား ကုန်ကျမည်ဖြစ်သဖြင့် နေပြည်တော်သို့ တင်ပြတောင်းခံ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ”စသည်ဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းအောင် ကျော်ဦး၏ “ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်အတွင်း အခြေခံပညာ ဦးစီး ဌာန လက်အောက်ရှိ အမည်ပေါက်နှင့် တည်နေရာ ကွဲလွဲ မှု ဖြစ်နေသည့် ကျောင်းများအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိ မှု”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက် တာမျိုးထွန်းမှ “နေပြည်တော် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနသို့ တင် ပြထားပြီး နေပြည်တော်မှ ခွင့်ပြုမှသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ”ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး လှိုင်းထွန်းအောင်၏ “ ကျိုင်းတုံ -တောင် ကြီးလမ်းမှ နောင်ကုန်-မိုင်းလန်း- ကမ္ဘာအေး ဘုရားသွား ကတ္တရာလမ်းအား ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရေး မည်သို့စီမံဆောင် ရွက်ပေးမည်”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ “၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပြည့် နှစ်တွင် ကုန်ကျငွေ(၂၂.၈၉) သန်းအား တွက်ချက်၍ ပြည် ထောင်စု ပြင်ထိန်းရန်ပုံငွေတွင် ထည့်သွင်း လျာထား တင်ပြ ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေ ရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ ဆောင် ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း " ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးမောင်ညို၏ "မဘိမ်းမြို့နယ်၊ ကုန်းမခံအုပ်စုအတွင်းရှိ ကုန်းမခံကန် ရေ သွယ်မြောင်း ပြန်လည်တူးဖော်ပေးရန်၊ ကန်အတွင်း အနယ် များဆယ်ပေးရန်နှင့် ရေထုတ်ပြွန်ပြင်ဆင်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ “မဘိမ်းမြို့နယ် စီ မံကိန်းရေးစွဲရေး ဦးစီးဌာနမှ မြို့နယ်လိုအပ်ချက်အလိုက် ဦး စားပေးတင်ပြလာပါက ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ထည့်သွင်းလျာ ထားတင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း" ဖြေကြားခဲ့သည်။
မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းလှဝင်း၏ “မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ပန်ဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝမ်ကောင်း (၁) ကျေး ရွာ အ.မ.ကရှိ ကျောင်းဆောင်ဟောင်းအား ကျောင်းဆောင် သစ်ခွင့်ပြု ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ “၆၀× ၃၀ ပေ စတီးဆောက်ချ တစ်ဆောင်အား၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ထည့်သွင်း လျာထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း " ဖြေ ကြားခဲ့သည်။
ကျောက်မဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးစိုင်းထွန်းဉာဏ် ၏ “ယခင်အစိုးရကာလ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာန များ မှ စည်ပင်သာယာရေးဘဏ်တွင် မြို့နယ်အလိုက် ထည့်ဝင် ငွေများ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ် စည်ပင် သာယာရေး ဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်းမှ ယခင်စည်ပင်သာယာရေးဘဏ်သည် ယခုအခါ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ဖြစ်နေကြောင်းနှင့် နေ ပြည်တော်တွင် ထားရှိပြီး ပူးတွဲပါဇယား (က/ခ/ဂ)ဖြင့် အ စည်းအဝေးမှတ်တမ်း စာအုပ်တွင် ထည့်သွင်းတင်ပြမည်ဖြစ် ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ ဦးညီညီ(ခ) ဦးညီလေးချမ်း၏ “ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လေယာဉ်ကွင်း (လေ ဆိပ်)နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်/ကုမ္ပဏီပိုင် လေယာဉ်မည်မျှရှိပြီး လေ ယာဉ်ကွင်း အသုံးပြုခရရှိမှု”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ “ရှမ်းပြည်နယ် တွင် လေဆိပ်(ဟဲဟိုး၊ လားရှိုး၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ်၊ မိုင်း ဆတ်) (၅)ခုသာရှိပြီး နှစ်စဉ်(၇၅၁.၉၇၂)သန်း အခွန်ရရှိပြီး ၎င်း အခွန်များအား လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာန (DCA)မှ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာသို့ ပေးသွင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း ” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးပြည့်ဖြိုးအောင်၏ “မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ နမ့်ဟူးခွန် ကျေးရွာ ရှိ ဒေသခံပြည်သူများ သောက်သုံးရေ ရရှိရေးအတွက် (၂) လက်မ ရေပိုက် (၁၃)ပေ (၂၄၃၇)ချောင်းနှင့် ရေသိုလှောင် ကန် (၂၀ x ၁၅ x ၇)ပေ (၁)လုံးအား ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီ အစဉ် ရှိ/မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ“ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ထည့်သွင်းလျာထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နှင့် ရန်ပုံငွေ ရရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း " ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
မိုင်းကိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးစိုင်းပန်၏ “မိုင်းကိုင်မြို့နယ်တွင် ဘောလုံးပွဲကြည့်စင် (၃၀x၁၀၀) ပေနှင့် အားကစားလေ့ကျင့်ရေးရုံ (၁၀၀x၁၅၀)ပေတို့အား ဆောက် လုပ်ပေးရေး”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန် ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ “ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြည် နယ် ရန်ပုံငွေတွင်လျာထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ ဦးအောင်ထွဏ်း၏ “နမ့်ဆန်မြို့ရှိ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းရုံး အဆောက်အအုံအား အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ “ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လုပ် ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဖျက်ဆီး၍ အသစ် တည်ဆောက်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန တင်ပြဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ် ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကလောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးသန်းထိုက်၏ “ရှမ်းပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဌာ န/ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံ စာ အပိုဒ်(၄၃)အရ ပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိသည့် ဓာတ်အား အသုံးပြုခများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ထား သည်” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ “၁၇.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် နဂါး ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှ ၁၄၂၉၉၄၈ ကျပ်သန်း ရရှိခဲ့ပြီး ပင်း ပက်စီမံကိန်းမှ ၅၈.၃၄၄ သန်းအား မရရှိသေးပါကြောင်းနှင့် ၇.၁၂ .၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပေးဆောင်ရန် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
လားရှိုးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးအောင်သူ၏ “လားရှိုးမြို့ဘူတာလမ်းတစ်လျှောက် ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ် ပွားတတ်သည့် ပါရမီလမ်းဆုံနေရာတွင် အချက်ပြမီးပွိုင့်များ တပ်ဆင်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ “လမ်းပြုပြင်ရန်အတွက် ခရိုင်စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးနှင့် သက် ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး တင်ပြလာပါက အနီး စပ်ဆုံးဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ထည့်သွင်းလျာထား ဆောင်ရွက်ပေး သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
လားရှိုးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ " လားရှိုးမြို့၊ မြို့ရှောင်လမ်း၌ ယာဉ်မတော်တဆမှု အများဆုံးဖြစ်ပွား တတ် သည့် နေရာများတွင် လမ်းညွှန်ရောင်ပြန် အမှတ်အသား များ၊ အရှိန်ထိန်းအတားအဆီးများ၊ လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ အ တားအဆီးများ ပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/ မရှိ" မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲ ထွေးမှ “လမ်းညွှန်အမှတ်အသားများအား ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါကြောင်း” ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဖယ်ခုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဒေါ်မေရီနျို့၏ “ဖယ်ခုံမြို့နယ်ရှိ အမက(၁၃) မိုးဗြဲ၊ အမက-တောင်တန်းနှင့် မူလွန်-အုံတိုင်းတွင် ကျောင်းဆောင်သစ်များ ဆောက်လုပ်ရာ ၌ တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီဆောင်ရွက်မှု မရှိ သော ကုမ္ပဏီများ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ “နေမင်းစံကုမ္ပ ဏီအား တင်ဒါစည်းကမ်းဖြင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဒေါက်တာဝဏ္ဏ စိုး၏ "ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ပန်ကြူ၊ နမ့်ခတ်နှင့် မိုင်းအင်း ကျေးရွာ အုပ်စုသို့သွားသည့် မြေသားလမ်း(၁၉/၀)မိုင်နှင့် (၁၅)ပေ ကွန် ကရစ်တံတား(၁)စင်း၊ (၅)ပေ Box Culvert (၁၈)စင်း၊ (၈) ပေ Box Culvert (၂)စင်းနှင့် (၁၀)ပေ Box Culvert (၂)စင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည် နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ပြည်နယ်စီမံကိန်းတွင် တင်ပြထားပြီး ရန် ပုံငွေ ရရှိမှုအပေါ် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ”ပြန် လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
လွိုင်လင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးခွန်ဒီဂေါလ် ၏ "လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပန်ဝိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်ဝိုး၊ ဝါးတော ကျေးရွာနှင့် လွိုင်လင်မြို့နေ ဒေသခံပြည်သူများ အတွက်ပန် ဝိုးရေထွက် နုန်းတားတမံများ ကာရံခြင်းနှင့် သဲနုန်းပြန်လည် တူးဖော်ဆယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ"မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှ “ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍနှစ်တွင် ငွေ(၅၀)သန်းအား ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေတွင် လျာထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်း၏ "တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပျံ့နှံ့မှုရှိ/မ ရှိနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများစီမံဆောင်ရွက်ထား မှု"မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီးဒေါက် တာမျိုးထွန်းမှ “ မိမိတို့ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ နယ်စပ်ဂိတ် များအား နေ့စဉ် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း၊ မြို့နယ်များတွင်လည်း ပညာ ပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း"ပြန်လည် ဖြေ ကြားခဲ့သည်။
ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးခိုင်ညီညီ ကျော် ၏ "ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ အင်းခေါင်းဘုန်းကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ်ရာတွင် ကျန်ရှိနေသည့်လုပ်ငန်း(၂၅%) ခန့် အ တွက် လိုအပ်သောရန်ပုံငွေကို ထည့်သွင်းလျာထား ဆောင် ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ"မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ “၅. ၄.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မိမိတို့ နတလ ရန်ပုံငွေမှ (၅၀)သန်း အား ထောက်ပံ့လှူဒါန်း ပေးပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ထပ်မံဆောင် ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်း " ဖြေကြားခဲ့သည်။
မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းလှဝင်း၏ "ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ် လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ လျှပ်စစ်ဓာတ် အား ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေ များ"မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ “ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဓါတ် အား ဖြန့်ဖြူးရေးမြို့နယ် (၃၆)မြို့အနက်(၃၄)မြို့ရှိပြီးဖြစ် ကြောင်း၊ ရွာပေါင်း(၄၇၈၇)ရွာတွင် ၂၉၄၆ ရွာမီးလင်းရန် ကျန်သေးကြောင်း ထိုအတွက် ဆိုလာပြားများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊ ဧပြီလတွင် ကျိုင်းတုံမြို့သို့ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူး ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ အထက်ကျိုင်း တောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအား (ဩဂုတ်လတွင်)မီး လင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း " ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
ရွာငံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးအေးမင်းစိုး၏ "ရွာ ငံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပလောင်တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်သော ပဒုံးကိုင်းနှင့် ဆတ်သေကျေးရွာတို့အား ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ Sub Center ခွဲဝေချထားရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ" မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ “လူ ဦးရေနည်းပါးပြီး၊ မြေနေရာလိုအပ်ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနပိုင် အနည်းဆုံး ပုံစံ(၁၀၅/၁၀၆)ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း” ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးညီညီမင်း၏ "ပင်လောင်းမြို့နယ် မီးသတ်စခန်းတွင် ဝန်ထမ်း(၅)ဦးနှင့် မီးသတ်ယာဉ်(၁)စီးအား ထပ်မံဖြည့်တင်း ပေးရန်နှင့် အရေးပေါ် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ဖြည့် တင်းပေးနိုင်ခြင်း အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ"မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှ “ ဝန်ထမ်း(၅)ဦးအား အဆင့်သတ်မှတ်၍ ဆောင်ရွက်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဟိုက်ဒရော လစ် တစ်စီးဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မီးသတ် ယာဉ်အား ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် မရှိသေးပါကြောင်း" ဖြေကြားခဲ့သည်။
နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးအောင်ထွဏ်း၏ “နမ့်ဆန်မြို့ရှိ တောင်ပိုင်စော်ဘွားကြီး စဝ်ခွန်ပန်းစိန်၏ သမိုင်း ဝင် ဟော်နန်းကြီးအား တအာင်း (ပလောင်) စာပေနှင့် ယဉ် ကျေးမှု ဗဟိုကော်မတီထံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရန် အစီ အစဉ်ရှိ/မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ “ ယင်းဟော်နန်း အား တောင်ပိုင်စော်ဘွားကြီး စဝ်ခွန်ပန်းစိန်မှ ၁၉၃၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ဆောက်လုပ်ပြီး ၁၈.၃.၁၉၉၃ ခုနှစ် တွင် စော်ဘွားကြီး သရေစည်သူ စဝ်ခွန်ပန်းစိန်၏သားသာ မိုင်း စဝ်ခွန်ဟွမ်မှ နမ့်ဆန်မြို့နယ် ဆေးရုံသို့ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲခရီးစဉ် အတွင်းရေးမှူး(၁)ဗိုလ်ချုပ် ကြီး သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးမှ နမ့်ဆန်မြို့နယ် အထွေ ထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပိုင်ဆိုင်သည့် ဧည့်ရိပ်သာ မြေနေရာ အား ၂.၁.၂၀၁၀ ရက်နေ့တွင် ကုတင်(၅၀)ဆံ့ ဆေးရုံတိုး ချဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းဆေးရုံ ဟောင်းနေရာအား (၃. ၁. ၂၀၁၁) ရက်နေ့တွင် ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ခွင့်ရ ဒေသဦးစီးရုံး သို့ ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံရဲစခန်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဆိုပါနေရာအား နှစ်(၃၀)ဂ ရန် ရရှိထားသဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးရန် အစီအစဉ် မရှိကြောင်း” စသည်ဖြင့် ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးစိုင်းကျောက်၏ “မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရန်အတွက် မြို့ပြအိုးအိမ် အိမ်ရာများ တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်း အစီအ စဉ်ရှိ/မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ “ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာ ငွေတွင် လျာထားနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်းနှင့် အခြားဌာန များနှင့် ညှိနှိုင်း၍ မြေနေရာ ရှာပြီး မြို့နယ်စီမံကိန်းမှ ဦးစားပေး တင်ပြလာပါက သင့်လျော်သော ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လျာထားပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
လွိုင်လင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးခွန်ဒီဂေါလ်၏ “လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ဆင်ခြေဖုန်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ လုံအောင်နှင့် ရွှေဥဒေါင်းကျေးရွာချင်းဆက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မြေသားလမ်း (၈) မိုင်ကို စံကိုက်မြေသားလမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လုံခြုံ ရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ“ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၂၀၂၀-၂၀၂၁ အဆိုပြု တင်ပြလာပါက ရန်ပုံငွေအား တွက်ချက်၍ ဆောင်ရွက်ရသဖြင့် ရန်ပုံငွေလုံ လောက်မှုရှိမှသာ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း” ပြန် လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
လွိုင်လင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးခွန်ဒီဂေါလ် ၏ "လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပန်ဝိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ဝါးတော၊ ပန်ဝိုး ကျေးရွာနှင့် ဆင်ခြေဖုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်အုံကျေးရွာများ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် မည်သို့စီမံ‌ ဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်"မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ “ ၎င်းတွင်ဂျာမဏီနိုင်ငံ ၏ KFW ချေးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပါကြောင်း နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ် ကြောင်းနှင့် ပန်အုံကျေးရွာအား ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာငွေတွင် ထည့် သွင်း လျာထားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ” ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ် မှူးစိုးသူထွန်း၏ “ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ခိုလမ်မြို့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ရှေ့တန်းကင်းစ ခန်း အတွက် ရုံးအဆောက်အအုံအား ဆောက်လုပ်ပေးရန် အ စီအစဉ် ရှိ/ မရှိ”မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ “ ပြည်ထောင်စုရန် ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရသော ဌာနဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံ တင်ပြတောင်းခံထား သော်လည်း ခွဲဝေရရှိမှုမရှိပါကြောင်းနှင့်၂၀၂၀-၂၀၂၁ တွင် ထပ်မံတင်ပြ တောင်းခံပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း " ဖြေကြားခဲ့ သည်။
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဒေါက်တာဝဏ္ဏ စိုး၏ “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကျိုင်းတုံမြို့ နယ်၌ One Stop Shop (OSS)ရုံး (၂)ထပ် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခွင့် ချထားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ” မေးခွန်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည် မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသန္တရ စာရင်းတွင် လျာထားပြီးဖြစ်ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေ ကြားခဲ့သည်။
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး ၏ "ယခုအစိုးရသက်တမ်း (၁- ၄-၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ ယနေ့အထိ လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ အမှုတွဲများ"မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ “ ပြည်ထောင်စုမှ ပေးပို့လာသော အမှုပေါင်း (၆၉၂)ခုအနက် ပိတ်သိမ်းသည့် အမှုပေါင်း(၃၉၀)ခု၊ ဗဟိုသို့တင်ပြထားသည့်အမှု(၁၄၀) ခု ကျန်ရှိသည့်အမှုပေါင်း(၃၀၂)၊ စိစစ်ဆဲအမှုပေါင်း(၁၆၂)ဖြစ်ပါ ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးသိန်းဇော် မိုး၏ "ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ ညောင်ရွှေ-တုံ့ဟိုးစံကား-လွိုင် ကော်လမ်းနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လွယ်မောရွာ အဝင် လမ်း ပေပေါင်း(၁၁၈၀၀)ကို ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် တိုးမြှင့်ပေး ရန်" မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ “ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြည် ထောင်စုဘဏ္ဍာတွင် ထည့်သွင်းလျာထားပြီးဖြစ်ကြောင်း” ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
မောက်မယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဒေါ်နန်း ဖွေးဟွမ်ဦး၏ " မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်း ဒေသခံပြည်သူ များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်နှင့် အခွင့်အရေး များ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု မရှိစေရန် ဌာနအသီးသီးအား မူဝါဒနှင့် အညီမည်ကဲ့သို့ လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်ပေးမည်"မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဦး စိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ “ ဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အားလုံးသည် မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးစွဲရေးမှ ပြည်နယ်စီမံကိန်းသို့ တင်ပြရ ကြောင်း ပြည်နယ်စီမံကိန်းမှ စိစစ်ပြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြကာ အတည်ပြုချက်ရယူပြီး ဆောင်ရွက်ရကြောင်း တောင်သူများ ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှ လမ်းညွှန်မှာ ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း" ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ် မှူးလင်းကျော်ခိုင်၏ "ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံတကာ ဆက် သွယ်ရေးလမ်းမကြီး (AH2) အဖြစ် သတ်မှတ် ထားရှိသော မိတ္ထလာ-တောင်ကြီး-ကျိုင်းတုံ- တာချီလိတ် လမ်းမကြီးနယ်နိ မိတ်အတွင်း အခိုင်အမာ ဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းများ မရှိစေရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့စီမံ ဆောင်ရွက်သွားမည်"မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဦးခွန်ရဲထွေးမှ “ လမ်းဦးစီးဌာန နှင့် မြို့နယ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးဌာနတို့ ပေါင်းစပ်၍ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအထိ လမ်းနယ်နိမိတ် အမှတ်အသားများ၊ ပန်းဖလက် များ ဖြန့်ဝေအသိပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း " ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးအိုက်မွန်း၏ "ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ယုံးမောကျေးရွာအုပ်စု၊ ယုံးမော ကျေးရွာမှ နမ့်နင်းချောင်းကူးတံတားသွားလမ်း အရှည်(၄)မိုင်နှင့်အ ဆိုပါတံတားမှ ဒွန်းတောင်ကျေးရွာ-မန်ပြိန်းလုံ ကျေးရွာ-တာမိုးညဲမြို့သို့ ဆက်သွယ်ထားသည့် လမ်းအရှည် (၈)မိုင်၊ စုစုပေါင်း(၁၂)မိုင်ကို မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ပေးမည့် အ စီအစဉ် ရှိ/ မရှိ"မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ “ ၎င်းတွင် ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နတလ ရန်ပုံငွေဖြင့် တံတားတစ်စင်း ဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်၍ (၁၂)မိုင်လမ်းပိုင်းအား ရန်ပုံငွေမလုံ လောက်သဖြင့် လက်တလောတွင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မ ရှိသေးပါကြောင်း"ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးအိုက်မွန်း၏ "ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်ဖတ်ကာကျေးရွာအုပ်စု၊ ရီးယန်ကျေး ရွာမှ နားဖိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လုံဂျာယန်-မန်ကန်-နားဖိုင်ကျေး ရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း(၅)မိုင်နှင့် (၁၀)ပေချောင်းကူးတံ တား(၁)စင်း၊ Box Culvert(၄)ခု ပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/ မရှိ "မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ “ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ လျာ ထား ဆောင်ရွက်ပေးထားမည် ဖြစ်ကြောင်း"ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဒေါက်တာဝဏ္ဏ စိုုး၏ “ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်း စက်မှုလက်မှု အထက်တန်း ကျောင်းနှင့် စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်း မြေနေရာရရှိရေးနှင့် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” မေး ခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည် မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ “မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့် မြေ ရိုင်းများကော်မတီ(ဗဟို)ထံသို့ တင်ပြခဲ့ပါကြောင်း၊ မြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာနသို့ အမှုတွဲ ပေးပို့ရန်အ ကြောင်းကြားထားပါကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကျောက်မဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းထွန်း ဉာဏ်၏ “ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အ ထောက်အကူပြုစေရန် ကုမ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂလိကများ၏ Performan ce Guarantee ငွေများကို ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် ထားခွင့် ပြုရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စီ မံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်မှ “အဆိုပါရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စရပ်များ ထားရှိနို်င်ပါကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေ ကြားခဲ့သည်။
မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးစိုင်းလင်းမြတ်၏ “မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ လွိုင်ဆောင်ထောက်ဒေသ ကျောက်မျက်တူး ဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်များ မည်သည့် အချိန်တွင် ပြန် လည်ချထားပေးမည်” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်သယံ ဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက် တာညီညီအောင်မှ “လုံခြုံရေး အခက်အခဲ ရှိပါကြောင်း၊ လုံခြုံ ရေးကောင်းမွန်ပါက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါ ကြောင်း” ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးညီညီ(ခ) ဦး ညီလေးချမ်း၏ “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် ကျွဲ၊ နွားစားကျက်မြေများ သတ်မှတ်ခြင်း” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ “သတ်မှတ်ထားသော စားကျက်မြေ မရှိ ပါကြောင်း၊ ကျွဲ၊ နွားများ စားသုံးမှုများ လိုအပ်ပါက ကျေးရွာ သား၊ ကျေးရွာသူများအနေဖြင့် စာတင်ပြလာပါက ရရှိနိုင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း” ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းလှဝင်း ၏ “ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဒေသန္တရ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး စီမံကိန်းကော်မတီနှင့် Heho Resort (INN KHA UNG) ကုမ္ပဏီတို့အကြား အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU)” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်မှ ၂၇- ၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် MoU ထိုးခဲ့ပါကြောင်း၊ အကျိုးအမြတ် ခံစားခွင့် အနေနဲ့ ပါရှိခြင်း မရှိပါကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းလှဝင်း၏ “မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ဖာဝေါ၊ဆင်မောင်း၊တာကော် ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိသည့် ကျေးရွာ(၄)ရွာ အား စိမ့်စမ်းရေသွယ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ “အနီးစပ်ဆုံး ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်တွင် စီမံကိန်း ရေးဆွဲ၍ တင်ပြလာမှုပေါ် မူတည်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း” ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးအေးမင်းထိုက်၏ “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ စက်မှုဇုန်/စက်မှုရပ်ကွက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအ ဖွဲ့မှ စီမံဆောင်ရွက်နေမှု” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ် လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ “တောင် ကြီးတွင် အေးသာယာ စက်မှုဇုန်၊ မူဆယ်စက်မှုဇုန်နှင့် တာ ချီလိတ် စက်မှုဇုန်တို့ ရှိပါကြောင်း၊ ၄င်းစက်မှုဇုန်များကို နိုင် ငံတကာမှ လာရောက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကမ်းလှမ်းခြင်း မရှိပါ ကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ရပ်စောက်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးခိုင်ညီညီ ကျော်၏ “ရပ်စောက်မြို့နယ်တွင် စွန့်လွှတ်ထားသည့် မြေ (၁၃၄၇) ဧကအနက် အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန်အတွက် (၁၀) ဧက ခန့်အား ဆောလျင်စွာ အသုံးပြုခွင့်ရရှိနို်င်ရန် မည်သို့ဆောင် ရွက်ပေးမည်” မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ “လတ် တလောတွင် မြေနေရာ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် မရှိ သေးပါကြောင်း” ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
အဆိုနှင့် ဥပဒေ(မူကြမ်း)များ တင်သွင်းခြင်း
ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ဦးညီညီ(ခ)ဦး ညီလေးချမ်း၏ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးတွင် ပလပ်စတစ်အိတ်သုံးစွဲခြင်းကို လျော့ချရေးအတွက် ပညာပေး ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ပေးရန်နှင့် ပလပ်စတစ်အိတ် သုံးစွဲမှု ကင်းမဲ့ဇုန်များကို စီမံချက်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ရှမ်းပြည် နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးမှ ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးမှ ရှင်း လင်းပြီး ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ရယူခဲ့ ကာ ကန့်ကွက်သူမရှိ၍ အဆိုအား အတည်ပြုကြောင်း လွှတ် တော်ဥက္ကဌက ကြေညာခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ တွင် ပါဝင်သော ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၉-၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ် ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေ စာရင်းအား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ် တော်သို့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်မှ တင် သွင်းခဲ့ရာ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူကာ အတည်ပြု ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာခဲ့သည်။
ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးမောင်ညိုမှ ရှမ်းပြည်နယ် ဂုဏ်ထူး ဆောင်လက်မှတ်နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ပစ္စည်းချီးမြှင့်အပ် နှင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (မူကြမ်း)ကို လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားရှင်းလင်းခဲ့ကာ လွှတ် တော်၏အဆုံးအဖြတ် ရယူကာ ကန့်ကွက်သူမရှိ၍ အတည် ပြုကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာခဲ့သည်။
ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင် လင်းခေးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးစိုင်းအောင်မျိုးကျော်မှ ရှမ်းပြည်နယ် အခြေခံပညာကျောင်းများ ဘေးကင်းစိတ်ချရသော အစား အ သောက် ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံစာ ဖတ် ကြားရှင်းလင်းခဲ့ကာ လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ် ရယူကာ ကန့် ကွက်သူမရှိ၍ အတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေ ညာခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် သက်တမ်း အ တွင်း ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ကြိမ်၊ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ၄ ကြိမ်နှင့် အထူးအစည်းအဝေး ၁ ကြိမ် စုစုပေါင်းလွှတ် တော် အစည်းအဝေး ၂၃ ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကာ အဆို ၅၈ ခုဆွေးနွေး အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း ၁၀၀၄ ခု မေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။